Mapurisa eStockholm akaunganidza mhirizhonga dzinogona kuitika dzevaMuslim panguva yeDavis Cup
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » mhosva » Mapurisa eStockholm akaunganidza mhirizhonga dzinogona kuitika dzevaMuslim panguva yeDavis Cup
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • mhosva • Hurumende Nhau • nhau • Kutarisirwa • chengetedzo • Sweden Kupwanya Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Stockholm mapurisa akaunganidzwa mhiri kweguta, rinozotambira zviri kuuya Mukombe waDavis machisi pakati peSweden neIsrael, kudzivirira vangangove vanopesana neIsrael mhirizhonga uye kurwiswa nevanoenda kuMuslim uye 'vapoteri'.
Kusangana kweDavis Cup kwaifanira kuve kwakatambirwa muguta diki reBastad, asi kwakaendeswa kuStockholm nekuda kwezvikonzero zvekuchengetedza. Vakuru veTennis veSweden vakati havagone kuvimbisa kuchengetedzeka kwevatambi vechiIsrael uye vateveri panzvimbo yekunze muBastad.
Matches saka akaendeswa kuRoyal Tennis Hall yemukati muStockholm.
Kutamiswa kwacho kunouya chaiko makore gumi mushure memhirizhonga muMalmo, apo mazana ematsotsi eMuslim akatsigirwa nemahoodlum emapapiro eruboshwe akazadza migwagwa kuti 'vakumbire' kudzimwa kwemitambo yeDavis Cup yakanangana neIsrael.
Kare kumashure, mhirizhonga ine chisimba yakazadza guta, iro rine vanhu vazhinji vechiMuslim vanoenda 'munharaunda'. VaMuslim hoodlums vakarwa nemapurisa, vachikanda matombo uye vachipwanya mota.
Sweden ichatamba neIsrael muDavis Cup Europe-Africa Group I inosunga vhiki rino, pamwe neanokunda mumutambo achitsvaga nzvimbo mu2020 Davis Cup Qualifiers.
Sweden yakunda makombe manomwe eDavis pakati pa1975-1998 uye vari vechishanu pane ese-nguva runyorwa rwevamiriri.